नआत्तिनुस्, कोरोना लाग्दैमा अस्पताल भर्ना हुनु पर्दैन प्यारासिटामोल खाएरै पनि ठीक हुन सक्छ
नवराज कुँवर काठमाडाैं, १८ जेठ
कोरोना भाइरस कसरी फैलिन्छ ? यसबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ ? विभिन्न विज्ञको सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा तपाईंका लागि हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौँ ।
कोरोना भाइरसले मानिसको फोक्सोलाई संक्रमित गर्छ ।
यसका २ मुख्य लक्षण हुन्छन्, ज्वरो र सुख्खा खोकी ।
कहिलेकाहीँ कोरोनाका कारण व्यक्तिलाई सास फेर्न अप्ठेराे हुन्छ ।
कोरोनाले गर्दा लाग्ने खोकी आमखोकी जस्तो हुँदैन । कोरोना लाग्दा लगातार खोकी लाग्न सक्छ । अर्थात्, तपाईंलाई एक घण्टा वा त्योभन्दा ज्यादा समयसम्म लगातार खोकी लागिरहन सक्छ । २४ घण्टाभित्र कम्तीमा ३ पटक तपाईंलाई निकै अप्ठेरो पर्ने गरी खोकी लाग्छ । तर, खोक्दा कफ आयो भने तपाईंलाई कोरोनाको सम्भावना न्यून हुन्छ ।
यो भाइरसका कारण शरीरको तापमान ३७.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्छ । यसरी व्यक्तिको शरीर खुब तात्छ र उसलाई जाडो महसुस हुन सक्छ । व्यक्तिलाई कामज्वरो पनि आउन सक्छ ।
घाटीमा खसखस, टाउको दुखाइ र डाइरिया पनि हुन सक्छ । हालै गरिएको एक शोधका अनुसार केही खाँदा स्वाद र कुनै चिजको गन्धको महसुस नहुनु पनि कोरोना भाइरसको लक्षण हुन सक्छ ।
कोराना भाइरसको लक्षण सुरू हुन औसतमा ५ दिनको समय लाग्न सक्ने बताइन्छ । तर, कतिपयलाई अलि छिट्टो पनि देखिन सक्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार भाइरसलाई शरीरमा पुग्न र लक्षण देखिनुका बीच १४ दिनसम्मको समय हुन सक्छ ।
अस्पतालमा भर्ती कहिले हुनुपर्छ ?
जजसमा कोरोना भाइरसको संक्रमण छ, तीमध्ये धेरैजसो आराम गर्दा वा प्यारासिटामोल जस्ता दुखाइ कम हुने औषधि खाएरै ठीक हुन सक्छन् ।
अस्पतालमा भर्ती हुनुपर्ने स्थिति त्यतिबेला मात्र बन्छ, जतिबेला व्यक्तिलाई सास लिन अप्ठेरो हुन्छ । बिरामीको फोक्सोको परीक्षण गरी डाक्टरले संक्रमण कति बढेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछन् । त्यसपछि बिरामीको स्थिति हेरेर अक्सीजन वा भेन्टिलेटरमा राखिन्छ ।
तैपनि, बिरामीलाई अस्पतालको इमर्जेन्सीमा भर्ती गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि कोरोना भाइरससम्बन्धी जानकारी राखिएको छ ।
बिरामीलाई सास फेर्न अप्ठेरो भइरहेको छ भने नेपाल सरकारको टोल फ्रि नम्बर १११३ मा चौबिसै घण्टा तथा हेल्पलाइन नम्बर ९८५१२५५८३४, ९८५१२५५८३७, ९८५१२५५८३९ मा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
देशका विभिन्न प्रदेशले पनि नागरिकका लागि हेल्पलाइन सुरू गरेका छन्, जहाँ आवश्यक परे फोन गर्न सकिन्छ ।
इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आईसीयू)मा के हुन्छ ?
अस्पतालमा खास वार्ड हुन्छ, जहाँ गम्भीर बिरामीहरूलाई राखिन्छ । यहाँ कोरोना भाइरसका बिरामीलाई आवश्यक अक्सीजन मुखमा मास्क लगाइदिएर नाकमा टुयूबमार्फत् पूरा गरिन्छ ।
जो गम्भीर बिरामी छ, उसलाई भेन्टिलेटरमा राखिन्छ । यहाँ सिधै फोक्सोसम्म अक्सीजनको अधिक सप्लाइ गरिन्छ । यसका लागि बिरामीको मुखमा ट्यूब लगाइन्छ र नाक वा गलामार्फत फोक्सोमा अक्सीजन दिइन्छ ।
कति घातक हुन्छ कोरोना भाइरस ?
संक्रमित र मृत्यु भएकाको संख्या तुलना गर्ने हो भने कोरोना भाइरस खतरनाक होइन भन्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको मुत्यु दर १ देखि २ प्रतिशत मात्र छ ।
अहिले पनि धेरै देशमा कोरोना संक्रमित हजारौँ मानिसको उपचार चलिरहेको छ । कतिपय देशमा मृतकको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
५६ हजार संक्रमितको बारेमा एकट्ठा गरिएको जानकारीमा आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययन भन्छ :
६ प्रतिशत मानिस यो भाइरसका कारण गम्भीर बिरामी भए । यिनमा फोक्सो फेल हुने, सेप्टिक शक, अर्गान फेल हुने र मृत्युजस्तो जोखिम थियो ।
१४ प्रतिशत मानिसमा संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखियो । यिनमा सास लिनमा अप्ठेरो हुने र छिटोछिटो सास लिनेजस्ता समस्या आयो ।
८० प्रतिशत मानिसमा ज्वरो, खोकी जस्ता सामान्य लक्षण देखियो । कतिपयमा यसको कारण निमोनिया पनि बन्यो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्येष्ठ नागरिक र पहिलेदेखि नै स्वासप्रस्वासका बिरामी, मधुमेह र हृदयघातजस्ता समस्यामा रहेका मानिसहरू गम्भीर बिमार हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बिरामीलाई सास लिन सजिलो हुने गरी शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने गरी कोरोना भाइरसको उपचार गरिन्छ । व्यक्तिको शरीर आफैं भाइरससँग लड्न सक्षम नभएसम्म मृत्युको सम्भावना रहन्छ ।
कोराना भाइरसको किट बनाउने काम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
तपाईं कुनै संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने तपाईंलाई केही दिनका लागि दोस्रो व्यक्तिबाट टाढै रहन सुझाव दिइन्छ ।
पब्लिक हेल्थ इंग्ल्याण्डले भनेको छ, ‘जसलाई आफू संक्रमित भएको जस्तो लाग्छ, उसले सुरूमै डाक्टर, फार्मेसी वा अस्पताल जान हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई फोन गरेर वा अनलाइनमार्फत धेरै जानकारी लिन सकिन्छ ।
जो व्यक्ति भारतलगायतका मुलुकबाट आइरहेका छन्, उनीहरूले केही दिनसम्म अर्को व्यक्तिको सम्पर्कमा आउन नहुने सुझाव चिकित्सकहरू दिन्छन् । सरकारले अहिले त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिरहेको छ ।
धेरै देशले यो भाइरसबाट बच्नका लागि आफ्नो देशमा स्कुल, कलेज बन्द गरेका छन् भने सार्वजनिक सभाहरूमा रोक लगाएका छन् । नेपालमा त अढाइ महिनादेखि लकडाउन गरिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि मानिसका लागि सावधानीका उपायका बारेमा जानकारी जारी गरेको छ ।
संक्रमणको आशंका लाग्दा व्यक्तिले आफ्नो स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी वा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
विगतमा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ ।
अस्पताल पुग्ने सबै बिरामी जसमा फ्लू (सर्दी र सास लिन अप्ठेरो)को लक्षण छ, स्वास्थ्य सेवा अधिकारीले उनीहरूको परीक्षण गर्छन् ।
परीक्षणको नतिजा नआएसम्म तपाईंले प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, अरुबाट आफूलाई टाढै राख्नुपर्छ ।
राम्रोसँग हात धुने
कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले राम्रोसँग धुनुपर्छ ।
संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाँच्छ्यु गर्दा त्यसबाट निस्कने थूकको कण हावामा फैलिन्छ । यस्तो कणमा कोरोना भाइरसको विषाणु हुन्छ ।
संक्रमित व्यक्तिको नजिक जाँदा यस्तो विषाणयुक्त कण सासका माध्यमबाट शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ ।
तपाईं कुनै यस्तै ठाउँमा छुँदै हुनुहुन्छ, जहाँ यो कण टाँसिएको छ, त्यसपछि त्यही हातले आफ्नो आँखा, नाक वा मुखमा छुनुभयो भने यो कण तपाईंको शरीरमा छिर्छ ।
यस्तोमा खोक्दा, हाँच्छयु गर्दाको समयमा टिस्यूको प्रयोग गर्नु, हात धोएर मात्र आफ्नो अनुहारलाई छुनु, संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा जानबाट बच्नु नै यो भाइरस फैलनबाट रोक्ने महत्त्वपूर्ण उपाय हुन् ।
चिकित्सा विशेषज्ञका अनुसार फेस मास्कले कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रभाकारी काम गर्न सक्दैन ।
कति तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस ?
संसारभर दैनिक कोरोना भाइरसको हजारौं केस देखिइरहेको छ । धेरै संक्रमित त पहिचान हुनै बाँकी छन् ।
ताजा आँकडाअनुसार संसारका करिब १ सय ८८ देशमा अहिलेसम्म ६१ लाखभन्दा बढी मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । मृत्यु हुनेको संख्या पनि ३ लाख ७० हजार नाघिसकेको छ ।
भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी अमेरिका, स्पेन, इटाली, बेलायत र फ्रान्स प्रभावित भएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म १ हजार ५ सय ६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यीमध्ये ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ सय २० जना निको भएर घर फर्किइसकेका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७, १७:३८:००